Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 8)
Batariga Samsung Galaxy S11 ayaa soo muuqda
Batariga Samsung Galaxy S11 cusub ayaa soo muuqday, isagoo muujinaya awooda mAh ee uu kula tartami doono telefoonada kale ee heerka sare ah.
Beta-kii labaad ee Android 10 ee Galaxy S9 iyo S9 + hada waa la heli karaa
Samsung Koreans-ka ayaa sii daayay beta-kii labaad ee Android 10 ee Galaxy S9 iyo S9 +
Huawei P40 Pro wuxuu la imaan doonaa batroolka 5,500 mAh graphene oo leh 50 W lacag degdeg ah
Dhowr ka mid ah astaamaha iyo qeexitaannada Huawei P40 iyo P40 Pro, oo ah calanka soo socda ee shirkadda, ayaa la sii daayay.
Samsung waxay u adeegsan doontaa Chips 5G-yada 'MediaTek' taleefannada dhex-dhexaadka ah
Samsung waxay heshiis la gashay shirkadda MediaTek si ay ugu xirto aaladaha ugu horreeya ee 5G-ga ah ee ku teedsan bartamaha-dhexe ee u dhow 2020
10-ka casriga ah ee ugu awooda badan Nofeembar 2019, sida laga soo xigtay AnTuTu
Halbeegga 'AnTuTu benchmark' wuxuu noo keenayaa qiimeynta 10-ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan Nofeembar 2019. Waxaan halkaan kugu tuseynaa!
Kuwani waa sawirrada dhabta ah ee Vivo X30 oo muujinaya bilicdeeda oo dhammaystiran iyo astaamaheeda qaarkood
Vivo X30 wuxuu ka soo muuqday sawirro cusub oo dhab ah oo xaqiijinaya dhammaan bilicsanaanta iyo qaar ka mid ah astaamaha ugu waaweyn.
Snapdragon 865 ayaa ka muuqda Geekbench sida muuqata Sony Xperia 3
Warbixinnadii ugu horreeyay ee Sony Xperia 3 durba waa soo ifbaxayaan, Geekbench ma uusan rabin inuu ka mid noqdo kuwa aan gacan ka geysan uruurinta macluumaadka ku saabsan.
Sharp Aquos Zero2 wuxuu imaan doonaa rubuca koowaad ee 2020
Sharp Aquos Zero2 wuxuu imaan doonaa Q1 2020 oo ah mid ka mid ah boosteejooyinka moobiilka muhiimka u ah dhulka qorraxda soo socota. Faahfaahinta koowaad waa la yaqaan.
Redmi K30 waxaa lagu dhaliyay AnTuTu oo leh Snapdragon 765G
Barxadda tijaabada 'AnTuTu' waxay qaadatay Redmi K30 oo ay la socoto Snapdragon 765G waxayna wada dhalisay dhammaan qeybaheeda. Ogow natiijooyinka uu helay!
Reno 3 ayaa ka muuqda bogga Oppo oo ay weheliso Reno 3 Pro
Oppo waxay ku muujisay websaydhkeeda rasmiga ah labadeeda taleefan ee soo socda ee loo yaqaan Reno 3 iyo Reno 3 Pro, ta dambe oo leh isku xirnaanta 5G.
Huawei wuxuu u isticmaali doonaa HarmonyOS taleefannada qaar 2020
Huawei waxaa lagu qasbay inay u isticmaasho HarmonyOS, nidaamkeeda hawlgalka, qaar ka mid ah taleefannadeeda iyo sannadka 2020 waxaan awoodi doonnaa inaan ku aragno moodooyinka ugu horreeya.
Nokia 2.3 horeyba waxaa loogu sii qorsheeyay Ruushka lacag dhan 113 euro
Nokia 2.3 horeyba waxaa loogu heli karaa si horudhac ah Ruushka, qiimahiisu kama badna 115 Yuro waana macquul inay tahay taleefan laga fiirsado.
Xiaomi waxay iibisaa 10 milyan oo Redmi Note 8 ah saddex bilood gudahood
Redmi Note 8 waa iibgeeyaha ugu fiican suuqa, wuxuu dhaafey 10 milyan oo unug oo dunida oo dhan laga iibiyey muddo seddex bilood gudahood ah.
Samsung Galaxy A51 ayaa la arkaa kahor intaan la bilaabin
Kahor intaan si rasmi ah loo soo bandhigin, Samsung Galaxy A51 waxaa loo muujiyaa qof walba inuu yahay qalab dhexdhexaad ah oo leh afar kaamiro gadaal ah.
Realme 5i wuxuu bartilmaameedsanayaa soo bandhigis dhow
Realme ayaa dhowaan soo bandhigi doonta 5i cusub oo ah aalad gaari doonta suuqyo kala duwan sida India, Indonesia, iyo kuwo kale.
Samsung waxay soo bandhigeysaa beta-kii afaraad ee Android 10 ee Galaxy Note 10
Dhowr maalmood ka hor, Samsung waxay soo saartay noocii ugu horreeyay ee xasilloon ee Android 10 oo leh hal adeegsiga One UI 2.0 U
OnePlus 8 Lite ayaa lagu muujiyay jumladaha ugu horreeya
Bixiyeyaasha ugu horreeya ee OnePlus 8 Lite waa la sifeeyey, taleefan halkaas ku imaan doona rubuca labaad ee 2020 sida OnePlus 8 iyo Pro.
Hadda waxaa la heli karaa daabacaadda 'Star Wars' ee Samsung Galaxy Note 10
Hadda waxaad heli kartaa daabacaadda gaarka ah ee 'Star Wars of the Galaxy Note 10+', oo ah nuqul kooban oo ay ku jiraan daabacaad gaar ah oo ku saabsan Galaxy Buds
Vivo X30 iyo X30 Pro ayaa la bilaabi doonaa bisha Diseembar 16
Taariikhda ay soo bandhigi doonaan taleefannada cusub ee Vivo X30 iyo X30 Pro ee Shiinaha horay ayaa loo shaaciyey, taas oo wax ka yar 10 maalmood ay ka hadhsan tahay.
Cusboonaysiinta 'Android 10' ayaa mar labaad loogu fidiyaa OnePlus 6 iyo 6T ka dib markii la joojiyo qaybinta
The OnePlus 6 iyo 6T waxay durbaba helayaan nidaamka hawlgalka ee Android 10 markale dhowr jeer kadib markii la hagaajiyay dhibaatooyin kala duwan oo la soo sheegay.
Samsung Galaxy S11 + ayaa ku sharxi doonta batari 5.000 mAh ah
Samsung Galaxy S11 + ayaa la imaan doonta iyada oo leh baytar awood leh, wax loo aaneyn karo qaabkii hore ee loo yaqaan Galaxy S10 +.
Redmi Note 6 Pro ayaa ugu dambeyntii heleysa MIUI 11 oo xasiloon adduunka
MIUI 11 cusbooneysiinteeda qaab deggan waxay durbaba gaareysaa dhammaan qeybaha Redmi Note 6 Pro adduunka oo dhan.
Android 10 ayaa imanaya Sony Xperia 1 iyo Xperia 5
Sony waxay go’aansatay inay sii deyso cusbooneysiin weyn oo ku saabsan taleefannadooda Sony Xperia 1 iyo Sony Xperia 5, oo ay ku xigto lix kale.
Naqshadda Samsung Galaxy Note 10 Lite ayaa daadatay, iyadoo muujineysa waxyaabo kadis ah
Naqshadaynta Samsung Galaxy Note 10 Lite ayaa la soo daadiyey, iyadoo la soo bandhigayo tafaasiil aad u xiiso badan oo ku saabsan taleefanka cusub oo laga helay soo saaraha Kuuriya.
Heerka sare ee 'iQOO Neo 855 Edition' hadda waa rasmi
Baro wax ku saabsan dhammaan astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee iQOO Neo 855 Racing Edition cusub oo leh Snapdragon 855 Plus.
Nokia 9 Pureview ayaa durba bilaabay inuu helo Android 10
Ugu dambeyntiina, cusbooneysiinta Android 10 ayaa imaaneysa Nokia 9 Pureview, oo ka mid ah HMD Global ee waxqabadka ugu sarreeya HMD Global.
Samsung Galaxy Note 9 wuxuu helaa beta-ka cusub ee Android 10 oo leh balastarka amniga Disembar
Samsung Galaxy Note 9 wuxuu hadda helaa beta labaad ee Android 10 oo leh balastarka amniga Disembar.
Samsung Galaxy S11 wuxuu awoodi doonaa inuu duubo fiidiyowyo 8k ah
Laga soo bilaabo SamMobile waxay xaqiijinayaan in Galaxy S11 ay awood u yeelan doonto inay ku duubto fiidiyowyo 8k xal ah 30 fps, oo ah taleefankii ugu horreeyay ee oggolaada.
Snapdragon 765 iyo 765G, Chipset-ka cusub ee leh 5G isku dhafan ee loogu talagalay heerka dhexe
Hawlwadeennada cusub ee bartamaha-Qualcomm, kuwaas oo ah Snapdragon 765 iyo 765G, ayaa horeyba si rasmi ah loo soo bandhigay.
Pixels-kii ugu horreeyay ee Google wuxuu helayaa casriyeyntii ugu dambeysay ee barnaamijka
Google waxay siineysaa cusbooneysiintii ugu dambeysay ee softiweer Pixels-kii ugu horreeyay. Moodooyinka ku-guuleysta ee kuwan ayaa sidoo kale helaya qalab casri ah.
Snapdragon 865 horey ayaa loo soo bandhigay: maxay tahay inay bixiso?
Snapdragon 865 waa processor-ka cusub ee casriga ah ee loo yaqaan Qualcomm kaas oo horey si rasmi ah loogu shaaciyey suuqa.
Motorola One Hyper ayaa lagu soo bandhigay sawirro ka hor bilaabista
Motorola ayaa qorsheyneysa inay soo bandhigto saacadaha soo socda One Hyper cusub oo ah aalad soo jiidan doonta indhaha bulshada kamaradeeda soo ifbaxa.
Dareenka faraha ee Galaxy S11 ayaa ka weynaan doona jiilkii hore
Maaddaama taariikhda soo bandhigida jiilka cusub ee Galaxy S kala duwan yihiin, xanta la xiriirta ...
Shirkadda Huawei ee suuqa Spain ayaa 8 dhibcood ka dhacday sannadka 2019
2019 oo dhan, saamiga suuqa ee shirkadda Aasiya ee Huawei ee Spain wuxuu ka kordhay 28% ilaa 20%.
Caddaynta batteriga waxay muujineysaa jiritaanka Samsung Galaxy Fold 2
Laba baytar ayaa ka soo muuqday Kuuriyada Koonfureed si ay u muujiyaan waxa beddeli doona Galaxy Fold, oo ka mid ah taleefannada isku laaban ee suuqa yaalla.
Vivo V17 waxay horey u leedahay taariikh rasmi ah oo la bilaabayo
Dhawaan waxaan ka heli doonnaa mobiil cusub oo waxqabad dhexdhexaad ah shirkadda Vivo, oo ka mid ah shirkadaha Shiinaha ee inta badan na siiya taleefannada.
Eeg 360 °-bixiyaha fiidiyowga ee Samsung Galaxy A91 oo si buuxda u muujinaya
Samsung Galaxy A91 ayaa gebi ahaanba lagu daadiyay muuqaalkiisa cusub ee video-ga ah iyo sawirro ay daabaceen 91Mobiles.
Samsung taleefanka isku laabmaya ee soo socda ayaa ka jaban kan Galaxy Fold
Samsung ayaa soo saari doonta laba taleefan oo isku laaban sanadka 2020, midkood wuxuu noqon doonaa taleefan ka raqiisan oo balan qaadaya inuu noqon doono iibiyaha ugu fiican.
Redmi K30 5G wuxuu la imaan lahaa kamarad Sony IMX686 64 MP ah
Macluumaad cusub ayaa la helay oo tilmaamaya qaraarada kaamirada ee Redmi K30 5G. Kicinta ugu weyn waxay noqon doontaa 686 MP Sony IMX64.
Xiaomi kama soo saari doonto taleefannada badan Mi Mi range
Heerka Xiaomi Mi Max ayaa dhammaad ku dhow oo ma jiri doonaan taleefoonno cusub oo dhexdeeda ah, sida shirkaddu mar horeba si rasmi ah u xaqiijisay.
Mi 10 Pro waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Xiaomi
Lin Bin, madaxweynaha Xiaomi, wuxuu muujinayaa jiritaanka calanka xiga ee shirkadda, Xiaomi Mi 10 Pro aan la garanayn.
Samsung France ayaa daaha ka rogtay daahfurka dhowaan ee Galaxy S10 Lite
Samsung France waxay muujineysaa in Samsung Galaxy S10 Lite ay si dhakhso leh suuqa u gali doonto si ay ula tartanto moodooyinka kale ee dhex dhexaadka ah.
Galaxy S10 wuxuu ku helaa Android 10 nooca xasilloon ee Spain
Nooca xasilloon ee Android 10 ee loogu talagalay Galaxy S10 saddexda nooc ee kala duwan ayaa hadda laga heli karaa Spain, qaabkani waa midka ka horreeya soo saarista nooca ugu dambeeya.
Khadadka Galaxy A ee Samsung ayaa ku kordhi doona A11, A31 iyo A41
Khadadka Samsung Galaxy A wuxuu ahaa guul la taaban karo oo shirkadda Kuuriya waxay rajeyneysaa inay balaadhiso qadka ...
Redmi K30 ayaa lagu sifeeyaa fiidiyowga, oo xaqiijinaya dhammaan faahfaahinta qaabka iyo qaababka
Fiidiyowga 'Redmi K30' ayaa la soo daadiyay halkaas oo aan ku xaqiijin karno dhammaan faahfaahinta naqshadeynta iyo astaamaha farsamada ee terminaalka.
Isniinta ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Cyber ​​Isniinta' ee ku saabsan taleefannada casriga ah iyo qalabyada
Cyber ​​Monday waa fursada ugu dambeysa ee aan ka faa'iideysaneyno todobaadka Black Friday, oo ah usbuuca maanta dhammaanaya.
Shirkadda Huawei waxay weydiisaneysaa shirkadda Foxconn inay soo saarto wax ka badan 50 milyan oo ka mid ah taleefannada gacanta ee 5G
Shirkadda Foxconn ayaa soo saari doonta in ka badan 50 milyan oo taleefannada gacanta ah ee loo yaqaan 'Huawei 5G' sannadka dambe, sida ku cad xogaha cusub ee soo ifbaxay.
Lenovo K10 wuxuu u muuqdaa mid la aqoonsan yahay wuxuuna u muuqdaa nooc la beddelay oo ah Moto E6 Plus
Dukumiintiyada shahaadada NCC ayaa shaaca ka qaaday in magaca taleefanka soo socda ee Lenovo uu yahay Lenovo K10, oo ah nooc loo bixiyay Moto E6 Plus.
Kuwani waa taleefannada casriga ah ee leh kamaradaha ugu fiican sida uu sheegayo DxOMARK
Sannadkan oo dhan, terminals mobilada cajiibka ah ayaa la soo bandhigay, iyaga oo dhammaantood ku muujinaya qaybta sawirada, si kastaba ha noqotee, maahan in dhammaan moodooyinka ay ka muuqdaan dhammaan qeybaha.
Huawei Mate X wuxuu helayaa EMUI 10 Beta
Huawei Mate X wuxuu bilaabaa inuu u cusbooneysiiyo EMUI 10 qaabka beta ee Shiinaha maaddaama agaasimaha guud ee shirkaddu uu horey si rasmi ah ugu dhawaaqay.
OxygenOS kii ugu dambeeyay ee 10 ee beta-ka OnePlus 6 iyo 6T wuxuu keenaa hagaajinta cilladaha iyo hagaajinta kamaradaha
In kasta oo qalabka qaar ay hadda helayaan cusbooneysiin Android 9 Pie ah, OnePlus wuxuu soo rogayaa cusbooneysiin beta kale oo ku saleysan ...
Galaxy S11 wuxuu ku bilaabi lahaa 108 MP sensor
Galaxy S11 wuxuu ballanqaadayaa inuu noqdo tixraac xagga sawirka ah isagoo adeegsanaya dareeraha MP 108 iyo mid kale oo sawirrada habeenkii ah.
Samsung Galaxy Note 10 iyo Xusuusin 9 waxay horeyba u helayaan baarka amniga OTA ee Diseembar
Samsung Galaxy Note 10 iyo Galaxy Note 9 waxay helayaan cusbooneysiin cusub oo software ah oo ku daraya dhejiska amniga December.
Vivo iQOO Neo oo leh Snapdragon 855 Plus ayaa soo mariyay barxada TENAA oo sawirada lagu daray
IQOO Neo cusub ayaa dhawaan la sii deyn doonaa, mid aan la imaan doonin Snapdragon 845 sida kii ugu horreeyay ...
Kuwani waa sawirrada xayeysiinta ee Redmi K30 oo si buuxda u muujinaya
Laba sawir oo cusub oo la soo rogay oo ka mid ah Redmi K30 oo muddo dheer la sugayay ayaa soo muuqday iyagoo muujinaya dhinacyo kala duwan oo naqshadeynta ah. Halkan ka eeg!
Kuwani waa sawirrada xayeysiinta ee Vivo X30 oo muujinaya dhabarkiisa iyo midabada uu ku imaan doono
Dhowr sawir oo xayeysiin ah oo Vivo X30 ah oo ay la socdaan processor-ka Samsung ee Exynos 980 ayaa u muuqday inay muujinayaan naqshaddeeda dambe.
Ma jiri doono Android 10 oo loogu talagalay taxanaha Samsung ee Galaxy S8 iyo Galaxy Note 8
Waxaa la xaqiijiyey in Samsung Galaxy S8 iyo Galaxy Note 8 aysan heli doonin cusbooneysiinta software-ka ee ku daraya nidaamka hawlgalka Android 10.
Nooca 5G ee Lenovo Z6 Pro dhab ahaan waa Lenovo L79041 horey loo ansixiyay
Lenovo Z6 Pro 5G cusub ayaa lagu cadeeyay keydka TENAA ka hor intaan suuqa laga bilaabin.
Digniin! Redmi Note 7 Pro dab ayaa qabanaya inta fiidiyowga la ciyaarayo
Warbixin isticmaale ayaa soo baxday in faahfaahinta in moobilkiisa Redmi Note 7 Pro uu dab qabsaday isagoo ciyaaraya fiidiyowyo.
Khariidadda loo yaqaan 'Android 10 roadmap' ee loogu talagalay Galaxy S10 iyo Note 10 waxay na qaadaysaa illaa Janaayo
Xusuusin 10 iyo Galaxy S10 ayaa si rasmi ah u heli doona nooca xasilloon ee Android 10 bisha Janaayo. Kuwaas oo lagu dari doono mobiillo kale oo ka imanaya gobollada kale.
Beta-kii seddexaad ee Android 10 ee Galaxy Note 10 hadda waa la heli karaa
Beta-ka seddexaad ee Android 10 oo leh One UI 2.0 ayaa hadda loo heli karaa dhammaan isticmaaleyaasha kuwaas oo qayb ka ah barnaamijka beta dadweynaha ee Samsung
Kani waa noocyada cusub ee midabka cusub ee Redmi Note 8 Pro oo aad hubaal ka heli doontid
Hindiya ayaa heshay nooc midab cusub oo ah Redmi Note 8 Pro kaas oo lagu magacaabo Electric Blue (buluug koronto). Baro taas!
Madaxweyne ku xigeenka sharafta ayaa shaaca ka qaaday awooda batteriga iyo dhumucda Oppo Reno 3 Pro 5G
Dhumucda Oppo Reno 3 Pro 5G, iyo sidoo kale awoodda batteriga uu ku qaadan doono hoostiisa hoostiisa ayaa la shaaciyay.
Asus ROG Phone 2 waa mid ka mid ah 5 taleefoon ee casriga ah ee leh tayada maqalka ugu fiican, sida uu sheegay DxOMark
Tayada codka iyo codka ee Asus ROG Telefoon 2 waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican maanta, sida ku cad waxa DxOMark ay hadda shaaca ka qaaday dib u eegisteeda cusub.
Dhawaan Realme ayaa gabi ahaanba ka go'i doonta Oppo si ay ugu shaqeyso si madaxbanaan
Realme waxaa laga filayaa inay "dhisto nidaamkeeda deegaanka iyo khadadka wax soo saarka," ayuu yiri Chung Hsiang-wei, Agaasimaha Ganacsiga ee Realme Taiwan.
Telefoonka Asus ROG wuxuu ugu dambeyntii helayaa Android Pie
Telefoonka Asus ROG ee 2018 ayaa ugu dambeyntii horeyba u helay cusbooneysiinta software ee ku daraya Android Pie OS.
Samsung waxay soo bandhigtay nooc xasiloon oo ah Android 10 gudaha Jarmalka
Wax kasta oo khilaafsan, shirkadda Kuuriyada Koonfureed ee Samsung ayaa soo saartay nooca ugu dambeeya ee Android 10 ee Galaxy S10 ee Jarmalka.
Samsung Galaxy Note 10 Lite ayaa la imaan doonta Android 10, Exynos 9810 iyo S Pen
Hal xubin oo dheeri ah oo ah taxanaha 'Galaxy Note 10' weli lama sii deyn. Kani waa noocyada 'Lite', oo muddo toddobaadyo ah laga sugayay hadda.
Asus Zenfone 5Z wuxuu helayaa cusbooneysiinta Android 10
Cusbooneysiinta Android 10 waxay u imaaneysaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee casriga ah ee 2018, taas oo ah Asus ZenFone 5Z.
Maamulaha guud ee Huawei wuxuu ku andacoonayaa in shirkaddu ay noqon karto lambarka 1aad, xitaa haddii uusan jirin Google
Ren Zhengfei, oo ah madaxa shirkadda Huawei, ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu siiyay CNN in shirkaddu ay noqon karto lambar 1, xitaa haddii uusan jirin Google.
Honor V30 Pro waxaa ku dhaliyay dhamaan qeybaheeda Master bench benchmark
Taxanaha 'Honor V30' wuxuu sii wadaa soo saarista wararka kadib markii la bilaabay laba maalmood ka hor. Midka cusub wuxuu ku saabsan yahay 'Honor V30 Pro' oo maraya heerka 'Master Lu benchmark'.
Samsung ayaa mar kale loo caleemo saaray inay tahay nooca ugu iibinta badan Yurub
Samsung waxaa loo caleemo saaray hal rubuc oo dheeri ah inay tahay nooca ugu iibinta badan Yurub waxayna xitaa maamushaa inay kordhiso iibkeeda kana fogaato tartamayaasheeda.
Motorola One Hyper ayaa la soo bandhigi doonaa bisha Diseembar
Motorola One Hyper ayaa si rasmi ah u shaqeyn doonta 3-da bisha Diseembar munaasabad ka dhici doonta dalka Brazil maadaama horeyba loogu baahiyay shabakadaha. Telefoon cusub oo ku dhex jira.
Qiimaha Nokia 2.3 ayaa si qarsoodi ah internetka looga sii daayay ka hor inta uusan bilaaban
5-ta Diseembar ee soo socota ayaa laga yaabaa inay soo bandhigto Nokia 2.3. Intaas ka hor, qiimaha iibka ee suurtagalka ah ayaa la xaday. Halkan ku baro!
Samsung waligeed laguma aqoon inay cusbooneysiiso noocyada cusub ee Android si deg deg ah suuqa, iyadoo a
Sida laga soo xigtay waxa Madaxweyne Honor Zhao Ming ku sheegay wareysi uu dhawaan bixiyay, Honor V30s ma dhalin doono DxOMark.
Maamuusku wuxuu ku dhawaaqay liiska qalabka heli doona Magic UI 3.0
Honor wuxuu soo saaray liiska taleefannadiisa oo heli doona cusbooneysiinta cusub ee 'UI 3.0' oo ku saleysan nidaamka hawlgalka Android 10.
Sida loo helo liiska xulashooyinka qarsoon ee ku yaal Xiaomi
Mid ka mid ah shirkadaha ku guuleysanaya suuqa ugu weyn waa, shaki la'aan, Xiaomi. The…
Honor V30 iyo V30 Pro, labada calan ee cusub ee lagu bilaabay 5G iyo shan kamaradood
Honor V30 iyo V30 Pro (oo sidoo kale loo yaqaan Honor View30 iyo View 30 Pro) ayaa horay loo sii daayay. Waxaan ku siineynaa dhammaan faahfaahinta!
Naqshadda Samsung Galaxy S11 Plus waa la sifeeyey ... Oo waxba ma jecli doontid
Naqshadaynta Samsung Galaxy S11 ayaa la daadiyay, iyadoo la muujinayo waxa calanka soo socda ee soo saaruhu u ekaan doono. Iyo, waxay u egtahay muuqaal adag iPhone 11.
Samsung Galaxy S8 wuxuu helaa balastarka amniga Nofeembar
Galaxy S8 weli lama ilaawin. Calankan 2017 wuxuu helayaa shaashadda amniga ee Noofambar 2019 iyada oo loo marayo cusbooneysiin.
Huawei wuxuu Shiinaha ka bilaabayaa MatePad Pro si uu ula tartamo iPad-ka
Huawei MatePad Pro mar horeba waa xaqiiq ka jirta Shiinaha lamana oga goorta ay imaaneyso qeybahan. Kiniin leh qalab fiican iyo qiimo wanaagsan.
Shirkadda Huawei waxay isku dayeysaa inay muuqaalkeeda dhaqdo iyadoo cambaareynaysa dhammaan kuwa ku eedeynaya inay gacan u tahay dowladda Shiinaha.
Redmi Note 7 waxay heshay casriyeynta barnaamijka caalamiga ah ee ku daraya MIUI 11 deggan. Halkan waxaan ku siineynaa dhammaan faahfaahinteeda!
Muuqaalka 'Nigthscape' wuxuu u yimaadaa kamaradda sawir-qaadista ee 'Realme 5 Pro' ee Yurub
Realme 5 Pro waxay heleysaa cusbooneysiin cusub oo software ah oo Yurub ah oo ku dareysa muuqaalka 'Nigthscape' kamaradda sawir-qaadaha.
Samsung Galaxy S11 waxaa laga diiwaangeliyey keydka Geekbench oo leh barnaamijka mobilada ee Exynos 9830 iyo Android 10.
Huawei Mate 30 waa guul ka gaadhay suuqa, iyadoo toddobo milyan oo unug lagu iibiyay laba bilood oo keliya suuqa, gaar ahaan Shiinaha.
Realme waxay ku xaqiijinaysaa shabakadaha bulshada liiska taleefannada marin u heli doona Android 10 iyo taariikhaha ay ku heli doonaan cusboonaysiinta la sheegay.
Geesaha qalooca iyo saddex kamaradood oo loogu talagalay Galaxy S11e
Samsung's Galaxy S11e ayaa laga yaabaa inuu ku soo bandhigo shaashad leh geesaha qalooca iyo saddex kamaradood oo gadaashiisa ah, sida laga soo xigtay OnLeaks.
Visionox waxay soo bandhigeysaa taleefan casri ah oo isku laaban iyo duubista AMOLED
Visionox waxay soo bandhigtay taleefankeedii ugu horreeyay ee casriga ah oo leh shaashad AMOLED oo dabacsan. Tani waxay isticmaashaa shaashad dhan 6.47-inji. Waxay sidoo kale muujisay guddi isku dhafan oo AMOLED ah.
Galaxy S10 miyuu cillad leeyahay? Samsung ayaa soo saartay cusbooneysiin ay ku saxayso
Samsung waxay hadda ku bixineysaa cusbooneysiin cusub oo software ah qaabka beta si loo xaliyo tan dhibaatooyin ah.
Xubin ka tirsan kooxda amniga ee OnePlus, iyada oo loo marayo madasha rasmiga ah ee shirkadda, ayaa la soo socodsiisay inay la kulmeen khalkhal amni.
FCC waxay soo saartay go'aan ka mamnuucaya hawlwadeenada inay adeegsadaan lacagaha kabitaanka dawlada dhexe si ay u iibsadaan qalabka Huawei iyo ZTE.
Sawir ka mid ah Huawei Nova 6 SE ayaa soo baxay oo ka sheekeynaya isu ekaanshaha muuqda ee taleefankan uu ku leeyahay iPhone 11 Pro.
Laba nooc oo cusub oo ah Xiaomi Mi MIX 3 5G ayaa imanaya
Xiaomi ayaa qorsheyneysa inay soo saarto Mi MIX 5G cusub, oo ah taleefannada casriga ah ee la soo saaray bishii Febraayo ee sannadkan oo si rasmi ah loo bilaabay bishii Maajo.
Maaddaama barnaamijka moobiilka ee Kirin 990 oo leh 5G taageero lagu martigelin doono 'Honor V30s', kuwani waxay noqon karaan kuwo aad qaali u ah.
Dhawaan Realme X2 Pro iyo XT waxay mudan doonaan ColorOS 7 beta, lakabka cusub ee shaqsiyeynta laga helo Oppo iyo Realme.
Raadi wax badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka cusub ee Nokia ee dhacaya 5-ta Diseembar iyo inuu noqon doono taleefankii ugu dambeeyay ee sannadka ee sumadda.
Vivo Y9s waa taleefan cusub oo casri ah oo la soo saaray oo leh Snapdragon 665
Baro dhammaan astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee Vivo Y9s, taleefanka casriga ee cusub ee laga bilaabay suuqa Shiinaha.
Talooyin taxane ah oo loogu talagalay Galaxy Note 10 + ayaa loo habeeyay sida ay tahay markii aad bilowdo markii ugu horeysay. Ha moogaan fiidiyowga.
AnTuTu waxay qaadatay Honor V30 Pro si ay ugu sameyso tijaabo waxqabad oo ay ugu barbardhigto shirkadda caanka ah ee Huawei Mate 30 Pro.
Kaamirada iswada ee loo yaqaan 'selfie camera' ee loo yaqaan 'Sony Xperia 5' ayaa waxaa tijaabiyey heerka 'DxOMark benchmark'. Halkan waxaan ku haynaa warbixinta.
Macluumaad cusub oo ku saabsan Samsung Galaxy S11 ayaa nasoo gaadhay. Tani waxay ka hadlaysaa dhowr qodob oo la xiriira astaamaheeda iyo taariikhda la sii deynayo.
Maamulaha Xiaomi wuxuu shaaca ka qaaday in MIUI 12 uu noqon doono interface kaas oo ku dari doona hab mugdi ah nidaamka oo dhan
Hawl wadeen Xiaomi ah oo laxiriira horumarinta MIUI ayaa shaaca ka qaaday inay noqon doonto MIUI 12 nooca isdhexgalka oo dari doona mugdiga buuxa.
Honor V30 wuxuu ka shaqeyn doonaa Android 10 sanduuqa, sida uu sheegayo Geekbench
Geekbench wuxuu u qaatay 'Honor V30' inuu si faahfaahsan uga hadlo qaar ka mid ah astaamaheeda iyo dhibcaha ku jira qeybta hal-xudunta ah iyo kuwa badan.
Galaxy S10 Lite iyo Xusuusin 10 Lite ayaa imaan lahaa Diisambar
Samsung ayaa soo bandhigi doonta Galaxy S10 Lite iyo Note 10 Lite si rasmi ah bisha Diseembar waxayna ka bilaabi doonaan Hindiya kahor dhamaadka sanadka.
Huawei Mate X wuxuu la kulmi karaa dhibaatooyin qabow
Huawei Mate X waxaa laga bilaabay Shiinaha iyadoo digniin loogu dirayo sanduuqiisa oo sheegaya in aan loo isticmaali karin haddii uu ka hooseeyo -5ºC dhibaatooyinka dhanka shaqada awgeed.
Wax soosaarka 3D ee Samsung Galaxy A71 ayaa ka muuqda fiidiyow ka tilmaamaya dhan walba
OnLeaks waxay noo keeneysaa fiidiyow cusub oo ay ku muujineyso Samsung Galaxy A71 oo leh shaashad daloolo oo gebi ahaanba muujineysa.
Samsung oo leh Android 10 ayaa "dab ku jira" sida badanaa loo sheego. Shirkadda Kuuriya ayaa hadda billowday beta cusub ...
Beddelista shaashadda Huawei Mate X waxay dhaaftay 900 euro
Taleefannada casriga ah ee leh shaashadda isku laaban ayaa durba dhexdeenna ah, in kasta oo xilligan aan la heli karin qof walba sababo la xiriira ...
Samsung Galaxy Note 9 wuxuu bilaabaa inuu helo beta-ka One UI 2 oo ku saleysan Android 10
Samsung waxay bilaabeysaa inay soo saarto Android 10-ku saleysan One UI beta ee loogu talagalay dadka isticmaala Galaxy Note 9 ee doonaya inay helaan.
Kuwani waa naqshadaha OnePlus 8 Pro ee shaandhada kaamirada afarlaha ah iyo muuqaalka
Waxaa soo ifbaxay daadad cusub oo ka kooban dhowr naqshadood oo ah muuqaalka OnePlus 8 Pro oo si buuxda u muujinaya.
Samsung Galaxy S11 waxaa lagu bilaabi karaa shaashad dhan 120 Hz
Dareemo cusub ayaa soo jeedineysa in muuqaalka muuqaalka Samsung Galaxy S11 uu muujinayo xaddiga inta jeer ee 120 Hz.
Realme 5s waa khadka dhexe ee cusub oo leh Snapdragon 665 horeyba loo sii daayay
Realme 5s ayaa ugu dambeyntii la sii daayay iyadoo ah casriga casriga ah ee dhex dhexaadka ah kaas oo soo bandhigaya Snapdragon 665 chipset.
Beta-kii ugu horreeyay ee Android 10 ee loogu talagalay Galaxy Note 9 hadda waa la heli karaa
Beta-kii ugu horreeyay ee Android 10 ee loogu talagalay Galaxy Note 9 ayaa hadda loo heli karaa dadka isticmaala Xubnaha Samsung ee deggan Kuuriya iyo Boqortooyada Ingiriiska.
Sawirada dhabta ah ee Vivo U20 iyo labadiisa fiidiyow ee xayeysiinta ah ayaa si buuxda u muujinaya
Sawirada dhabta ah iyo laba fiidiyow oo xayeysiis ah ee Vivo U20 ayaa u muuqday kuwa si buuxda u muujinaya. Dhowr ka mid ah qeexitaankiisa sidoo kale waa faahfaahsan.
Android 10 qaabkeeda xasilloon hadda waxay ku fideysaa OnePlus 7 iyo 7 Pro isticmaala Hydrogen OS
Android 10 qaabkeeda xasilloon ee hoos yimaada Hydrogen OS waxay u imaaneysaa OnePlus 7 iyo 7 Pro oo ka socda Shiinaha iyada oo loo marayo cusbooneysiin cusub.
Xiaomi waxay muujineysaa in MIUI horeyba u laheyd in ka badan 279 milyan oo isticmaale
MIUI, Xiaomi lakabkeeda u qaabeynta, ayaa hadda leh ku dhowaad 300 milyan oo isticmaale adduunka ah, sida lagu sheegay bayaan rasmi ah.
Samsung W20 5G waa taleefanka casriga ah ee laablaabmi kara ee Kuuriyada Koonfureed horay u soo saaray
Samsung W20 5G waa taleefan casri ah oo cusub oo ka socda shirkadda Kuuriyada Koonfureed oo soo bandhigtay naqshad la laaban karo waxaana laga bilaabay Shiinaha.
Huawei Nova 6 horeyba wuxuu uheystey taariikhda soo bandhigida ee ay soosaartay shirkadda Shiinaha waxayna noqon doontaa 5-ta bisha Diseembar markay rasmi noqoto.
Maalmo yar gudahood, waxaan awoodi doonnaa inaan ku rakibno beta-kii ugu horreeyay ee Android 10 ee loogu talagalay Galaxy S9 iyo Galaxy Note 9.
Bixinta degdegga ah waxay ka timid Xiaomi waxaana loo yaqaan 'Super Charge Turbo'
Xawaaraha degdegga ah ee Xiaomi, oo loo yaqaan Super Charge Turbo wuxuu ballan-qaadayaa inuu 100% ka qaadi doono batari 4000 mAh ah 17 daqiiqo oo keliya.
Tani waa waxa Galaxy Note 10 + Star Wars Edition Gaarka ah u ekaan doono
Toddobaad ka hor bilowga Star Wars: The Rise of Skywalker, Samsung waxay ku iibin doontaa iibinta Yurub qayb gaar ah oo ah Xusuusin 10 + oo lagu dhiirrigeliyey taxanahan.
Agaasimaha guud ee Redmi ayaa beeniyay warar xan ah oo ku saabsan Redmi Note 8 Pro oo leh Snapdragon 730G
Agaasimaha guud ee Redmi Lu Weibing ayaa beeniyay wararka xanta ah ee ka soo bilawday nooc la moodo inuu yahay Redmi Note 8 Pro oo leh Snapdragon 730G.
Motorola Razr horeyba qiimo qiima leh ayaa looga helay gudaha Spain
Motorola waxay xaqiijineysaa qiimaha iibka rasmiga ah ee Motorola Razr gudaha Spain waxayna noqon doontaa taleefankii ugu jabanaa ee isku laabma ee suuqa soo gala.
Geekbench wuxuu xaqiijinayaa faahfaahinta qaar ka mid ah dhexdhexaadka Realme 5s
Realme 5s ayaa ka soo muuqday barnaamijka tijaabada Geekbench si loo xaqiijiyo qaar ka mid ah astaamaheeda iyo tilmaamaha farsamo.
9ka S Pen ee ugu fiican wuxuu ka kooban yahay Galaxy Note 10 iyo qoraallo kale
Turjumida qoraalka, xulashada caqliga badan ama sawir qaadashada iskaa loo yaqaan 'selfies' ee meelaha fog laga hayaa waa qaar ka mid ah astaamaha aan ugu jecel nahay S Pen ee Galaxy Note 10 +.
Si tartiib tartiib ah ayaan u baranaynaa faahfaahin cusub oo ku saabsan calanka la filayo ee shirkadda Kuuriya. Waa xaqiiqo muuqata ...
Redmi K30 ayaa la bilaabi doonaa sanadka soo socda
In kasta oo xogaha iyo xanta ay ilaa hadda dhacday, Redmi K30 ayaa la soo bandhigi doonaa oo laga bilaabi doonaa suuqa 2020 sida ay ku dhawaaqday sumaddu.
Fold Galaxy 2 ayaa ka jaban kii hore
Samsung ayaa ka shaqeyneysa sidii ay dhowaan suuqa uga soo saari lahayd Galaxy Fold cusub, oo qiimaheeda uu balan qaadayo inuu ka hooseeyo kii asalka ahaa, sida ay sheegeyso xogaha la helay.
Huawei's iPad Pro, MatePad Pro, ayaa la soo saaray November 25
Bishii Nofeembar 25, Huawei waxay si rasmi ah ugu soo bandhigi doontaa Shiinaha beddelka Apple's iPad Pro, oo leh naqshad aad u la mid ah qaabka Apple.
Snapdragon 665 waa processor-ka la dejin doono hoostiisa Realme 5s
Horaa loo xaqiijiyay in processor-ka dhexdhexaadka ah ee lagu xajin doono daboolka Realme 5s ee la filayo uu yahay Snapdragon 665.
Mate 30 Pro, falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan Huawei "pro" ugu badan
Nagala baaraan falanqeyntan qotada dheer Huawei Mate 30 Pro iyo sidoo kale siraha ugu xiisaha badan iyo haddii ay runtii u qalanto.
Oppo wuxuu soo bandhigay Zoomka Reno2 ee League of Legends World Championship final
Si looga faa'iideysto dhammaan guuxdii uu League of Legends World Championship final keenay, Oppo waxay ku soo bandhigtay Reno2 Zoom munaasabadda.
MIUI 11 cusbooneysiinta softiweerka ayaa hadda ka socota OTA iyada oo loo marayo Redmi Note 8 Pro ee Hindiya, sida lagu sheegay warbixinta dadka isticmaala qaarkood.
Redmi 4 wuxuu helayaa cusbooneysiinta software-ka ee xasilloonida ah ee ku daraya MIUI 11. Tan, xilligan, waxaa laga bixiyaa Hindiya.
Infinix S5 Lite waa midka dhexe ee rasmiga ah ee rasmiga ah kaas oo la imanaya shaashad daloollan iyo qiimo aad u jaban
Waxaa jira taleefan casri ah oo cusub oo leh daloolka-derbiga iyo sedex dareeraha sawir module ah oo suuqa yaalla, waana Infinix S5 Lite.
EMUI 10 hadda waa laga heli karaa adduunka taxanaha Huawei P30
Lakabka cusub ee EMUI 10 ee qaabeynta ayaa imanaya calanka Huawei P30 qaabkiisa xasilloon. Caalamkuu ku faafayaa.
Cusboonaysiin cusub ayaa u socota Realme XT. Waxay ku dareysaa balastarka amniga ee ugu dambeeyay iyo muuqaalka Nigthscape ee kamaraddaada hore.
Muuqaalka Realme 5s ayaa la muujiyay; awooda batterigaaga sidoo kale
Flipkart ayaa sii daayay sawirada rasmiga ah ee Realme 5s, shirkada bartamaha soo socota ee soo socota oo bilaaban doonta Nofeembar 20.
Motorola RAZR-ka cusub waxaa loogu dhawaaqay inuu yahay taleefan casri ah oo isku laaban qaali ah oo shaashad jilicsan leh
Motorola waxay ku dhawaaqday Razr cusub, oo ah mid casri ah oo qaali ah oo heer dhexe ah kaas oo soo bandhigaya bandhig dabacsan.
Xiaomi ayaa soo bandhigi doonta taleefan casri ah oo kaamirad ka wanaagsan kan Mi CC9 Pro dhawaan
Xog cusub oo soo baxaysa ayaa soo jeedinaysa in Xiaomi ay diyaarinayso taleefan casri ah oo kamarad ka fiican kan Mi CC9 Pro.
ZUI 11.5 beta wuxuu hirgeliyaa Android 10 iyo isdhexgalka Windows PC ee Lenovo Z6 Pro
Maalmo ka hor waxaan ka hadalnay cusbooneysiinta cusub ee Samsung Galaxy A70s heleyso, taas oo, iyo kuwo kale ...
Galaxy A01, Samsung-dhamaadka-hoose waxay horey u leedahay magac
Galaxy A01 wuxuu noqon doonaa taleefanka casriga ah ee ugu raqiisan Samsung, kaas oo shirkadda Kuuriya ay sidoo kale damacsan tahay inay ku guuleysato kala soocida
Moodooyinka Samsung ee M20 iyo M30 ayaa heli kara cusbooneysiinta Android 10 si ka dhakhso badan intaad ka filan lahayd soo saaraha Kuuriya.
Ma waxaad raadineysaa telefoon leh kamarad wanaagsan? Motorola One Zoom waa ka raqiisan yahay weligiis Amazon, markaa ha seegin fursaddan.
Gionee M11 iyo M11s waxay heleen nooc midab cusub ah. Shirkadda ayaa ku dhawaaqday iyada oo loogu talagalay suuqa Shiinaha, sidaa darteed waa la heli karaa dhowaan.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Realme 5 waxay ku dareysaa hab mugdi ah iyo duubista fiidiyowga xagasha ballaaran
Realme 5 waxay heleysaa casriyeyn softiweer ah oo ku dareysa hab mugdi ah iyo taageero duubista fiidiyowga kamaradda ballaaran
Hisense Kingkong 6, taleefanka casriga ah ee cusub ayaa lagu shaaciyey batarigiisu in ka badan 10000 Mah
Hisense ayaa ku dhawaaqday KingKong 6, oo ah taleefan casri ah oo cusub oo leh awood batari ah oo ka badan 10000 mAh.
Laba nooc oo cusub oo xasuusta Samsung Galaxy S10 ayaa imanaya
TENAA, wakiilka shahaado siinta Shiinaha, ayaa nidaamiyay laba nooc oo cusub oo RAM iyo ROM ah oo Samsung Galaxy S10 ah.
Beta-kii labaad ee loo yaqaan 'One UI 2.0' ee loogu talagalay Galaxy Note 10 wuxuu horeyba ugu sii jeedaa inuu gaaro Spain maalmahan. Beta oo hagaajiya cayayaanka.
Sida MIUI 11 loogu kala dirayo aaladaha Xiaomi iyo Redmi, EMUI 10, oo ah kan cusub ...
Beta-kii seddexaad ee Android 10 ee Galaxy S10 ee saddexda nooc ayaa hadda diyaar u ah soo dejin.
Soosaarayaasha ugu horreeya ee Galaxy A51 waa la sifeeyaa waxayna muujinayaan naqshad la mid ah Xusuusta 10
Bixitaannadii ugu horreeyay ee waxa uu noqon doono Galaxy A51 ayaa hadda la dusiyay, terminal nuqul ka sameysan doona qaybo badan oo ka mid ah naqshadda Galaxy Note 10.
Naqshadda muuqaalka 'Honor View V30' ayaa daboolka laga qaaday, xafiiltan cusub oo iPhone 11 ah?
Naqshadda suurtagalka ah ee 'Honor View V30' waa la soo daadiyey, taasoo u muuqata shaki iyada la mid ah tan iPhone 11 Pro. Huawei ma dooneysaa inay la tartanto Apple?
Haddii aad raadineyso heshiisyo teknolojiyad ah oo loogu dabbaaldego Maalinta Kali ee Shiinaha, waxaan soo uruuriney sida ugu wanaagsan ee maqaalkan lagu heli karo.
Hadda waad tijaabin kartaa EMUI 10 adoo noqonaya "tijaabiyaha beta"
Maanta waxaan kuu sheegeynaa sida ay u fududahay in la rakibo nooca cusub ee EMUI 10 shirkaddaada Huawei ka hor inta aysan rasmi ku noqon tallaabooyin fudud oo fudud, miyaad ku dhiiran tahay?
Fold Galaxy wuxuu ku iibiyaa Shiinaha shan daqiiqo gudahood
Ka ogow wax badan oo ku saabsan iibka wanaagsan ee Galaxy Fold ee Shiinaha oo la iibiyay ka dib shan daqiiqo oo keliya markii lagu iibinayay waddanka.
OnePlus ma sii wado bixinta laba nooc oo ka mid ah OnePlus 7 Pro mid ka mid ah suuqyada adduunka ugu waaweyn
The OnePlus 7 Pro oo leh 6 GB oo RAM ah oo leh 128 GB oo ah xusuusta gudaha iyo 12 GB oo RAM ah oo leh 256 GB oo ROM ah ayaan hadda lagu iibin Mareykanka.
Xadka Galaxy S11 wuxuu yeelan doonaa shan taleefan
Raadi wax badan oo ku saabsan inta moodel ee aan ka helayno inta u dhexeysa Galaxy S11 marka si rasmi ah loo soo bandhigo bisha Febraayo.
Mediatek processor-kiisa 5G ee taleefannada gacanta horay ayuu u haystay taariikh la bilaabi doono
Dhamaadka Nofeembar waxaan la kulmi doonnaa processor-kii ugu horreeyay ee taageerada 5G ka socda Mediatek, kaas oo imaan doona si uu uga caawiyo sheegashada shirkadda.
Redmi 5 iyo Xusuusin 5 waxay cusbooneysiinayaan MIUI 11
Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta MIUI 11 oo horeyba si rasmi ah loogu sii daayay Redmi 5 iyo Xusuusin 5 ee Shiinaha.
Xiaomi waxay lahaan doontaa taleefano wata shaashad 120 Hz ah sanadka 2020
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan qorshooyinka Xiaomi ee ah inaad adeegsato 120 Hz bandhigyada heerka cusbooneysiinta ee taleefannada la xushay illaa 2020.
Samsung Galaxy W20 5G horeyba waxay u laheyd taariikh rasmi ah oo ay soo saarayso
Samsung's Galaxy Fold ayaa ah taleefankii ugu dambeeyay ee la laaban karo ee shirkaddani soo saartay. In kasta oo aanan wali garan ...
Emailka Samsung wuxuu ka batay 1000 bilyan oo soo degsasho ah
Maamulaha emaylka Samsung, emailka Samsung, wuxuu dhaafey 1.000 bilyan oo soo degsasho ah, waa guul ay gaareen wax soo saarayaal aad u tiro yar.
OnePlus 8 Pro wuxuu soo bandhigi karaa bandhig 120Hz ah
Xanta ugu dambeysa waxay soo jeedineysaa in jiilka soo socda ee One Plus Pro kala duwanaan doono suuqa iyadoo la adeegsanayo shaashad 120Hz ah.
OnePlus wuxuu sii wadi doonaa inuu soo bandhigo laba nooc oo isku mar ah
Ka raadi wax badan oo ku saabsan xaqiijinta agaasimaha guud ee OnePlus inay sii wadi doonaan soo bandhigida laba taleefan jiil kasta oo cusub oo yimaada.
Redmi 8 iyo 8A waxay bilaabayaan inay helaan xasilloonida MIUI 11 global OTA
Xiaomi waxay durbaba sii deyneysaa cusbooneysiinta cusub ee software-ka ee Redmi 8 iyo 8A adduunka oo dhan oo ku daraya MIUI 11 qaabkeeda xasilloon.
Redmi sidoo kale waxay ku shaqeysaa qalabkeeda casriga ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xaqiijinta inay jirto Redmi Watch oo horumarin ah waxayna si rasmi ah suuqa u gali doontaa dhawr bilood gudahood.
Samsung Galaxy A70s waxaa lagu cusbooneysiiyaa muuqaalka 'Link to Windows' iyo taageerada headphone-ka USB-C
Samsung Galaxy A70s waxay heleysaa cusbooneysiin cusub oo ku dareysa laba shaqooyin waxtar leh: Xiriirinta Windows iyo taageerida dhagaha dhagaha ee USB-C.
Huawei Y9s: Nooca cusub ee bartamaha kala duwan ayaa rasmi ah
Ka raadi wax walba oo ku saabsan Huawei Y9s, taleefanka cusub ee khadka dhexe ee nooca oo si rasmi ah loogu soo bandhigay Shiinaha.
Galaxy S11 wuxuu la imaan doonaa baytariyaal waaweyn
Raadi wax badan oo ku saabsan batariyada waaweyn ee Galaxy S11 yeelan doono maadaama horeyba looga faafiyay warbaahin kala duwan ilaa iyo hadda.
Qeexitaanka iyo qiimaha Vivo Z5i waa la dusiyay
Vivo Z5i waa la dusiyay. Dhammaan qeexitaannada farsamo ee muhiimka ah iyo astaamaha, iyo sidoo kale qiimaheeda, ayaa la soo daadiyay.
Samsung Galaxy A71 ayaa goor dhow la imaan doonta Exynos 980 chipset iyo taageerada 5G
Warbixin cusub ayaa tilmaameysa in Samsung Galaxy A71 uu noqon doono terminal leh Exynos 980 chipset iyo taageerada shabakadaha 5G. Wuxuu kaloo sheegay inay dhowaan imanayso.
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta Mi Pilot, barnaamijka soo saaraha Shiinaha si aad ugu cusbooneysiiso Xiaomi qof kale kahor
TENAA waxay liis garaysaa Huawei Nova 5i cusub oo leh 4 GB oo RAM ah oo keydkeeda ku jira
Huawei Nova 5i wuxuu dhawaan heli doonaa 4GB RAM nooc ah, oo ku saleysan waxa TENAA ay dhowaan ku qortay keydkeeda.
Space Zoom, «hubka qarsoodiga ah» ee soo socda ee Samsung Galaxy S11
Zoom Spatial, taasi waa magaca Samsung "summaddii ugu dambaysay", mid ka mid ah dhinacyada xidigta ee soo socda ee Galaxy S11 la filayo inuu ka muuqan doono
Samsung waxay kordhin doontaa wax soo saarka taleefanka laabma ee 2020
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan qorshayaasha Samsung ee ah in la kordhiyo wax soo saarka taleefanka la laaban karo sanadka 2020 marka ay soo bandhigaan taleefano badan oo laab laaban.
Ma waxaad raadineysaa mobiil rakhiis ah oo kamarad wanaagsan leh? Huawei P9 hadda wuxuu marayaa wax ka yar 200 euro
Haddii aad raadineyso taleefanka gacanta ee qiimaha wanaagsan, ha seegin fursad aad ku iibsato Huawei P9 oo ka raqiisan sidii hore ee Amazon.
Xiaomi Mi CC9 Pro wuxuu helayaa dhibco kamarad isku mid ah sida Huawei Mate 30 Pro ee DxOMark
Dib u eegis dhameystiran ayaa ah waxa DXoMark ay ku sameysay Xiaomi Mi CC9 Pro keydkeeda xogta. Tani waxay ku jirtaa kaalinta labaad ee ugu fiican suuqa.
Huawei wuxuu muujinayaa qeexitaannada rasmiga ah ee Huawei Y9s
Huawei Y9s waa mid ka mid ah kuwa soo socda ee casriga ah ee soo socda, oo waxaan horeyba u ogaanay qeexitaankiisa farsamo ee rasmiga ah.
LG G8X ThingQ waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Ka ogow wax badan oo ku saabsan soosaarida LG G8X ThinQ cusub oo laga soo qaatay astaanta Kuuriya oo si rasmi ah looga iibsan karo Spain hadda.
Telefoonka labaad ee isku laaban Samsung ayaa horey u lahaa taariikhda soo bandhigida
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka cusub ee isku laaban ee Samsung, kaas oo rasmi ahaan u shaqeyn doona 19-ka Nofeembar sida lagu shaaciyay baraha bulshada.
Vivo S5 ayaa si buuxda loogu soo bandhigay boodhadhkeeda rasmiga ah ee rasmiga ah. Kaamirada seddex-geesoodka ah ee xarrago leh oo ay leedahay iyo shaashaddeeda leh muraayadaha iftiinka ayaa la soo bandhigaa.
Astaamaha ugu muhiimsan iyo tilmaamaha farsamo ee Oppo Reno 3 bartamaha-dhexe ayaa lagu soo daadiyay webka, iyo sidoo kale qiimaha noocyadiisa.
Vivo Y5s waxaa lagu bilaabay Mediatek Helio P65 iyo batari 5000 Mah
Vivo Y5s waa taleefanka casriga ah ee dhexdhexaadka ah ee 'Mediatek' oo leh Helio P65 SoC kaas oo laga bilaabay suuqa Shiinaha.
Xiaomi Mi Note 10 horey ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Soo ogow wax walba oo ku saabsan Xiaomi Mi Note 10, taleefanka cusub ee shirkadda Shiinaha oo leh shan kamaradood oo gadaal gadaal ah oo horeyba loo soo bandhigay.
Huawei Nova 6 ayaa gebi ahaanba la daadiyay iyada oo ay la socdaan dhammaan qeexitaankiisa iyo qiimayaasha
Astaamaha suurtagalka ah iyo tilmaamaha farsamo ee Huawei Nova 6 oo leh 5G ayaa lagu dhawaaqay; waxa uu siiyay ayaa sidoo kale soo muuqday.
Seddex sababood oo loo iibsado Xiaomi CC9 Pro
Miyaad ka fikireysaa inaad iibsato Xiaomi CC9 Pro? Waxaan ku siineynaa seddex sababood oo ah sababta loo hubin karo. Kafiican Xiaomi Mi 9T?
Ma waxaad raadineysaa raqiis Samsung Galaxy Note 8? Hadda qiimahiisu waa 481 euro oo ka yar kan Amazon!
Amazon ayaa guriga ka saartay daaqadda, taas oo kuu oggolaaneysa inaad ku iibsato raqiis Samsung Galaxy Note 8 oo raqiis ah qiimaha ugu fiican: in ka badan 480 euro dhimis.
Pixel 4 XL wuxuu maraa tijaabada adkeysiga ugu caansan
Faahfaahin intaa ka badan ka ogow JerryRigErance wax kasta oo tijaabinta tijaabada ah Pixel 4 XL ayaa maray, halkaas oo aysan sifiican ugu fiicneyn.
Xiaomi Mi CC9 Pro wuxuu si rasmi ah u noqonayaa kamarad 108 MP penta ah iyo in ka badan 5000 mAh oo batari ah
Xiaomi Mi CC9 Pro oo muddo dheer la sugayay ayaa halkan jooga, oo ah taleefan casri ah oo heer dhexdhexaad ah oo waxqabad badan leh. Waan kuu soo bandhigeynaa!
Huawei's P30 iyo Mate 20 taxanaha ayaa heli doona EMUI 10 xasilloon bishan
Huawei wuxuu soo bandhigi doonaa cusbooneysiinta barnaamijka kaas oo ku daraya EMUI 10 xasilloonida taleefannada Huawei P30 iyo Mate 20.
Xiaomi Mi 9 cusbooneysiinta Android 10 oo leh MIUI 11
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta Android 10 oo leh MIUI 11 oo lagu bilaabay qaabka beta ee Xiaomi Mi 9 sida aad horayba u aragtay.
Xiaomi Mi Watch: Smartwatch-ka ugu horeeya ee Xiaomi waa rasmi
Soo ogow wax walba oo ku saabsan Xiaomi Mi Watch, saacadda ugu horreysa ee sumadda Shiinaha ee u isticmaasha Wear OS inay tahay nidaam hawlgal horay loo soo bandhigay.
Android 10 qaabkeeda xasilloon ayaa durba u imanaya Asus ZenFone 6 iyada oo loo marayo OTA cusub
Asus ZenFone 6-dhamaadka sare wuxuu helayaa cusbooneysiin cusub oo software ah oo ku daraya Android 10 qaabkeeda xasilloon.
Noocyada muhiimka ah ee Samsung Galaxy A51 ayaa la helay
Dhawr ka mid ah astaamaha ugu waaweyn iyo tilmaamaha farsamo ee Samsung Galaxy A51 ayaa soo ifbaxay, mid ka mid ah kuwa dhexe ee xiga Koonfurta Kuuriya.
Honor 9X ayaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Ka ogow wax badan oo ku saabsan daahfurka Honor 9X si rasmi ah gudaha Spain maaddaama astaanta lafteeda ay horay ugu dhawaaqday baraheeda bulshada.
OnePlus wuxuu ku shaqeyn karaa smartwatch
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan wararka xanta ah ee ka imanaya warbaahinta kala duwan in OnePlus uu ka shaqeynayo smartwatch-keedii ugu horreeyay ee 2020.
ColorOS 7, interface-ka caadiga ah ee Oppo, wuxuu horey u lahaa taariikh rasmi ah oo la sii daayo
Oppo, iyada oo loo marayo warqad rasmi ah, ayaa ku dhawaaqday taariikhda la sii deynayo ee ColorOS 7, oo ah nooca soo socda ee lakabkeeda ku-xirnaanta ee ku saleysan Android.
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabista rasmiga ah ee Realme X2 Pro ee Isbaanishka iyadoo horeyba si rasmi ah loogu shaaciyey astaanta lafteeda.
Soo hel dhammaan faahfaahinta ku saabsan daahfurka OPPO A5 (2020) iyo A9 (2020) si rasmi ah Spain sida horay loo muujiyay.
10-ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan Oktoobar 2019, sida laga soo xigtay AnTuTu
Halbeegga 'AnTuTu benchmark' wuxuu noo keenayaa qiimeynta 10-ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan Oktoobar 2019. Waxaan halkaan kugu tuseynaa!
Miyaad u baahan tahay moobil raqiis ah si deg deg ah? 1 Alcatel 2019 hadda wuxuu marayaa wax ka yar 50 euro
Haddii aad raadineyso mobiil raqiis ah oo wata Android, hadda ma seegi kartid fursaddan: Alcatel 1 ee 2019 wuxuu ku kacayaa 49 euro oo keliya.
Qaado cadayga koronto ee ugu raqiisan Xiaomi Oclean X Sonic
Soo ogow dhiirrigelintan laga heli karo DHGate taas oo aad si ku-meelgaar ah ugu iibsan karto Xiaomi Oclean X Sonic qiimaha ugu wanaagsan ee leh lambarka dhimista.
Oppo's ColorOS 7 horeyba way u socotaa: waxay bilaabi lahayd bishan
Daadinta cusubi waxay muujineysaa taariikhda la sii deyn karo ee Oppo lakabka dambe ee qaabeynta, taas oo ah ColorOS 7.
Honor 10 Lite wuxuu helayaa Android 10 beta oo leh EMUI 10
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilawga Android 10 beta oo leh EMUI 10 ee loogu talagalay dadka isticmaala Shiinaha ee leh Honor 10 Lite oo horeyba marin ugu lahaa.
Nokia 2.3 ayaa imanaya, wuxuuna ku imaan doonaa sedex nooc oo midabbo kala duwan leh
Xog cusub ayaa soo baxday oo ku saabsan mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee soo socda ee HMD Global. Tani waxay ku saabsan tahay Nokia 2.3.
Awoodda batteriga ee Galaxy S10 Lite ayaa la muujiyay
Raadi wax badan oo ku saabsan batteriga uu yeelan doono Galaxy S10 Lite, maadaama horey loogu sii daayay warbaahin kala duwan, taas oo naga tagi doonta ismaamul wanaagsan.
Vivo Y19 wuxuu rasmi u noqonayaa shirkadda dhex dhexaadkeeda cusub
Vivo Y19 waa taleefoonka casriga ah ee dhex dhexaadka ah kaas oo si rasmi ah loo shaaciyey. Ogow astaamaheeda oo dhan iyo faahfaahinta qiimaha!
Cusbooneysiinta cusub ee Realme 3 Pro waxay ku dareysaa qaabka mugdiga iyo warar badan oo dheeri ah
Realme waxay u sii deyneysaa xirmo cusub oo firmware ah oo loogu talagalay Realme 3 Pro kaas oo ku daraya waxyaabo badan oo cusub iyo horumarin.
Xiaomi Mi Note 10 waxaa lagu soo bandhigayaa Isbuucaan Isbuucaan
Wax badan ka ogow ogeysiiska rasmiga ah ee Xiaomi, oo xaqiijinaya in Xiaomi Mi Note 10 si rasmi ah loogu soo bandhigi doono Nofeembar 6 magaalada Madrid.
Bixby hadda waxaa lagu heli karaa in kabadan 160 milyan oo qalab
Laba sano iyo bar kadib markii si rasmi ah loo bilaabay Bixby, kaaliyaha gaarka ah ee Samsung, Bixby, waxaa lagu rakibay in ka badan 160 milyan oo qalab.
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilowga rasmiga ah ee Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro oo leh 5G ee Shiinaha halkaas oo 5G horeyba si rasmi ah loogu ganacsiyay.
Xiaomi, iyada oo loo marayo xisaabteeda rasmiga ah ee Weibo, ayaa shaaca ka qaaday in Mi CC9 Pro uu noqon doono mid dhexdhexaad ah oo gudaha ku yeelan doona Snapdragon 730G.
Raadi wax badan oo ku saabsan kororka iibka taleefannada casriga ah ee adduunka oo dhan rubuc saddexaad ee sanadka oo jabiyay laba sano oo hoos u dhac ah.
Raadi wax badan oo ku saabsan processor-ka lagu dhejin doono Xiaomi Mi Note 10 Pro, oo loo soo bandhigay ikhtiyaar aad u awood badan oo ku jira baaxadda sare.